Madaxweyne Farmaajo Oo Mar-kale Uhuru Kenyata kula Kulmaya Moscow. – Awdalmedia
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo Uhuru Kenyatta ayaa waxaa toddobaadka soo socdo la fillayaa in ay isu arkaan magaalada Sochi ee dalka Ruushka.
Labada Madaxweyne ayaa casuumaad ka helayn dhigooda Ruushka, Vladimir Putin, waxaana lagu wadaa in Magaalada Sochi kaga qaybgalaan shirka 1aad, ee ay yeelanayan Madaxweyne-yaasha Ruushka iyo kuwa Afrika.
Xukuumadda Moscow ayaa shirkan ku soo casuumtay in ka badan konton hoggaamiye-yaasha Afrika, kaasoo ka furmaya Magaalada Sochi saddex iyo labaatanka bishan, iyadoo uuna socon doono muddo laba maalmood.
Xiriirka Madaxda Somaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa mid aan wanaagsanayn, ka dib markii habdhaqanka guracan ee Kenya uu ka careysiiyay Madaxda Qaranka Soomaaliyeed.